अष्ट्रेलियाको शिक्षाबारे सम्पूर्ण जानकारी फेयरमाः सरिता गुरुङ – Arthik Awaj
अष्ट्रेलियाको शिक्षाबारे सम्पूर्ण जानकारी फेयरमाः सरिता गुरुङ
By आर्थिक आवाज २०७६ माघ २ गते बिहीबार १२:५५ मा प्रकाशित
पोखरा शाखा कोअर्डिनेटर, ग्लोबल रिच
पोखराको भाटभटेनीमा सञ्चालित ग्लोबल रिचले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । ग्लोबल रिचको पोखरा शाखा स्थापनाको ५ वर्ष पुगिसकेको छ । शाखाले पोखरामा वर्षमा दुई पटक जनवरी र जुलाईमा फेयर गर्दै आइरहेको छ । माघ ४ गते शनिबार न्युरोडस्थित सिटी स्क्वायर बैंक्युटमा ‘द बिगेष्ट अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ हुँदैछ । यसैक्रममा ग्लोबल रिचका पोखरा शाखा कोअर्डिनेटर सरिता गुरुङसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
विद्यार्थीलाई परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको ग्लोबल रिचका विशेषताहरु के-के छन् ?
उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श प्रदान गर्ने उद्देश्यले ग्लोबल रिच संचालन भएको हो । ग्लोबल रिच स्थापनाको २९ वर्ष पुगिसकेको छ । विश्वका विभिन्न स्थानमा गरेर यसका ४३ शाखा छन् । पोखरा शाखा सुरु गरेको करिब ५ वर्ष भइसकेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान इच्छुक विद्यार्थीका लागि ग्लोबल रिच सबैभन्दा नजिकको सारथी हो । हामीले सेवा तथा सुविधा बापत विद्यार्थीसँग कुनै पनि चार्ज लिदैनौं । निःशुल्क रुपमा परामर्श प्रदान गर्दै आइरहेका छौं । भिजा डकुमेन्टेसनमा पनि कुनै चार्ज लिदैनौं । परामर्श लिने तथा भिजा डकुमेन्टेसनमा कुनै शुल्क विद्यार्थीले तिर्नुपर्दैन । युनिभर्सिटीको ट्युसन फि र हेल्थ इन्सोरेन्स तिरे पुग्छ । अष्ट्रेलियामा रहेका विभिन्न युनिभर्सिटीसँग हामीले समन्वय गर्दै आइरहेका छौं । संसारमा नै उच्चस्तरका तथा टप्न सफल भएका युनिभर्सिटी त्यहाँ छन् । अष्ट्रेलियामा रहेका धेरैजसो युनिभर्सिटीको अथोराइज्ड रिप्रिजेन्टेटिभ पनि हामी हौं । वेव साइडमा गएर सर्च गर्दा अथोराइज्ड डिलर ग्लोबल रिच हो भन्ने थाहा पाएर पनि हाम्रोमा धेरै विद्यार्थी आउने गरेको पाएका छौं ।
फेयर आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो ?
जनवरी १८ अर्थात माघ ४ गते शनिबार न्युरोडस्थित सिटी स्क्वायर बैंक्युटमा आठौं संस्करणको ‘द बिगेष्ट अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ हुँदैछ । विद्यार्थीको लागि यो राम्रो अवसर हो । फेयरमा अष्ट्रेलियाका ८ वटा प्रशिद्ध युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सिटी स्क्वायर पार्टी प्यालेसमा ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म फेयर हुनेछ । अष्ट्रेलियाका उत्कृष्ट युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि फेयरमा सहभागी हुँदैछन् । जहाँ विद्यार्थी तथा अभिभावकले युनिर्भसिटीका प्रतिनिधिसँग नै सिधा कुरा गर्न सक्नेछन् । जिज्ञासा राख्न र बुझ्न सकिनेछ । युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिबाट विद्यार्थीले सत्य, तथ्य तथा धेरै भन्दा धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले फेयर आयोजना गरिएको हो । अष्टे«लियाको शिक्षाका बारेमा आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी फेयरमा विद्यार्थीलाई प्रदान गरिनेछ ।
विद्यार्थीबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
हामीले विद्यार्थीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं । हाम्रोमा भिजा सक्सेस रेट उच्च छ । हामीले विद्यार्थीलाई सत्य तथ्य जानकारी दिन्छौं । विद्यार्थी हामीबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । विद्यार्थीको रुची, क्षमता, चाहना अनुसारको विषय छान्न हामी परामर्श दिन्छौं । कुन कलेज तथा युनिभर्सिटीमा केकस्ता कोर्ष छन्, त्यसको क्राइटेरिया के छ, स्कलरसिपको व्यवस्था के कस्तो छ सबै प्रस्ट पार्छौ । कलेज तथा युनिभर्सिटी छान्न हामी सहयोग गर्दछौं । त्यहाँ गएपछि पनि विद्यार्थी सन्तुष्ट भएको हामीले पाएका छौं ।
धेरै विद्यार्थीको रोजाईमा अष्ट्रेलिया पर्नुको कारण के हो ?
अहिले अष्ट्रेलियाको लागि विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको छ । अष्ट्रेलियामा धेरै राम्रा युनिभर्सिटी छन् । कोर्ष पनि धेरै छन् । विद्यार्थीले रुची अनुसारको कोर्ष पढ्न पाउँछन् । नर्सिङ, आइटी, इन्जिनियरिङ, विजनेस स्टडिज लगायतका विभिन्न कोर्ष छन् । जुन प्राय विद्यार्थीको रोजाईमा पर्ने गरेका छन् । नेपाल र अष्ट्रेलियाको मौसम पनि मिल्ने खालको छ । अध्ययन पश्चात उतै बस्न चाहने विद्यार्थीको लागि पिआरको व्यवस्था पनि राम्रो छ । विश्वमा नै नम्वर वान बन्न सफल ८ युनिभर्सिटी मिलेर ग्रुप अफ एट बनेको छ । हामी ती युनिभर्सिटीको पनि अथोराइज्ड रिप्रिजेन्टेटिभ हौं । ती युनिभर्सिटीले जुन पायो त्यही कन्सल्टेन्सीलाई अथोरिटी दिदैनन् ।
परामर्शको लागि ग्लोबल रिचमा विद्यार्थी किन आउने ?
ग्लोबल रिच पक्कै पनि अरु भन्दा फरक छ । ग्लोबल रिचले अष्ट्रेलियाका सबै युनिभर्सिटीको प्रतिनिधित्व गर्छ । हामीसँग धेरै युनिभर्सिटीको अथोरिटी छ । हामीले कुनै पनि चार्ज नलिई निःशुल्क प्रोसेसिङ गर्छौं । आइएलटिएसको कक्षा पनि सञ्चालन भइरहेको छ । हामीले विद्यार्थीलाई राम्रोसँग परामर्श दिन्छौं । सत्य, तथ्य जानकारी हामीले प्रदान गर्दै आइरहेका छौं । हामी क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटीमा विश्वास गर्छौं । विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु नै हाम्रो उद्देश्य हो । बजारमा प्रतिश्पर्धा धेरै छ । हामीलाई काम गर्न खासै अप्ठ्यारो छैन । ग्लोबल रिचको छुट्टै पहिचान छ । एउटा उत्कृष्ट ब्राण्ड बनिसकेको छ ।
पोखरामा ग्लोबल रिचको शाखा स्थापना गर्नुको उद्देश्य के हो ?
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको रोजाईमा ग्लोबल रिच पर्छ । हाम्रो काठमाडौं शाखामा काउन्सिलिङ लिन पोखराबाट धेरै विद्यार्थी गएको हामीले पायौं । यसबाट हामीलाई पोखरामा नै शाखा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । पोखरा तथा आसपासका विद्यार्थीलाई सहज होस् भनेर नै हामीले पोखरामा शाखा सञ्चालन गरेका हौं । सन् २०१५ बाट हामीले यस शाखा सञ्चालनमा ल्याएका हौं । हामीले अष्ट्रेलियालाई लक्षित गरेर परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौं । पोखरा तथा आसापासका विद्यार्थीलाई सहज होस भनेर नै हामी पोखरा आएका हौं ।